Akụkọ - Ndụmọdụ maka imepụta na ịkpụzi ngwa ngwa plastik
Kpọọ Anyị: 13530756565
Ebu ebu plastic
Ugboro abụọ injection ịkpụzi
Na-akpụzi cochọ Mma-IML
Ihe ngosi plastik
Die mgbatị usoro
Die mgbatị akụkụ
Nzube na Mgbakọ
Nhazi ụlọ eletrọniki
Imebe ngwa ụlọ
Plastic ngwaahịa imewe
Imewe akụkụ imewe
Ndụmọdụ maka akụkụ plastik a kapịrị ọnụ na ịkpụzi
Esi chepụta akụkụ plastik
Ngwaahịa na-agbanwe agbanwe
Otu esi eme akpati akpaka
Igbe ntanetị eletriki na ịkpụzi
ABS resin injection ịkpụzi
Site na mmepe nke ụlọ ọrụ nke oge a, e nwere ọtụtụ ihe plastic dị mma. N'otu oge ahụ, a na-ejikwa ngwaahịa plastik eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche. Karịsịa, a na-eji akụkụ plastik ziri ezi karị.
Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị ndụmọdụ maka nkenke akụkụ plastik.
Nhazi ọkwa nke nkenke plastik:
1. Nhazi nke akụkụ plastik ziri ezi
(1) Ahụkarị ụdị nke kpọmkwem plastic akụkụ
A. High akụkụ ziri ezi akụkụ, dị ka: moto Kwadobe, irighiri Kwadobe, kposara, biarin.
A na-ejikarị akụkụ ndị a kpọmkwem na usoro nnyefe ziri ezi nke igwe (dị ka ndị na-ebi akwụkwọ, kamera, ndị na-ehichapụ ihe na-akpaghị aka, ígwè ọrụ ntanetị, ngwa ngwa smart, obere UAV, wdg). Ọ chọrọ nchikota ziri ezi, mmegharị na-adị ire ụtọ, ogologo oge na enweghị mkpọtụ.
B. mkpa-walled akụkụ:
Ọtụtụ mgbe, mgbidi nke akụkụ plastik bụ ihe na-erughị 1.00mm, nke bụ akụkụ ndị nwere mgbidi dị warara.
Akụkụ nwere obere mgbidi nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ ngwaahịa ahụ pere mpe nke nta. Ma akụkụ ndị nwere obere mkpuchi nwere ike ghara ijuju n'ihi ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ma akụkụ ndị nwere obere mgbidi enweghị ike iguzogide ike nke ịnwụ ma gbajie oghere nwụrụ. Ya mere, nhazi nke akụkụ ndị nwere obere mgbidi kwesịrị ịhọrọ ihe nwere ezigbo arụ ọrụ. Na ezi uche imewe, dị ka edo mgbidi ọkpụrụkpụ, akụkụ nwere ike ịbụ kwa mgbidi. Mgbu, nnukwu akụkụ. N'ihi na ụfọdụ ultra-mkpa akụkụ, elu-ọsọ injection ịkpụzi igwe dị mkpa.
C. Akụkụ akụkụ:
Akụkụ anya chọrọ ezigbo mgbasa ozi / ọkụ ọkụ, yana ezigbo nkwụsi ike dị elu ma na-eyi nkwụsi ike. Dịka ọmụmaatụ, ntụgharị ihu concave na lens convex a na-eji na projectors chọrọ oke ziri ezi na nkwụsi ike.
A chọrọ plastic dị ka PMMA dị elu. N'otu oge ahụ, ụfọdụ akụkụ anya ọkụ ga-emekwa ụfọdụ akara ọma na akụkụ nke akụkụ ahụ ịnakwere ìhè ma ọ bụ ọbụna ọkụ ma ọ bụ kpochapụ ọkụ.
D. Igwe na-egbuke egbuke: Akụkụ dị elu na-agụnye akụkụ anya, yana akụkụ ndị ọzọ chọrọ akwa elu elu (enyo enyo). Kinddị akụkụ a na-ejikarị ngwaahịa ngwaahịa eletrọnịkị eme ihe, dịka shells ekwentị mkpanaaka. Uche nke ụdị ngwaahịa a kwesịrị ịtụle ihe plastik nwere ezigbo mmiri mmiri, ọdịdị ọkpụrụkpụ na teknụzụ anwụ.
E. waterproof plastic akụkụ
Ọtụtụ ngwaahịa eletriki na eletriki na-achọ ihe akaebe mmiri, dị ka iko / elele mmiri / elektrọnik na-enweghị mmiri, ngwaahịa na ngwa na mmiri nwere gburugburu mmiri.
Methodszọ ndị bụ isi nke ikpuchi mmiri bụ akara ezoro ezo na elu ngwaahịa ahụ, dị ka igodo agbachi, jacks gbara gburugburu, akara akara, ịgbado ọkụ ultrasonic, wdg.
F.IMD / IML (in-ebu-mma, na-ebu-labeelu)
Usoro a bụ itinye ihe nkiri PET na oghere ịkpụzi ọgwụ ma jikọta akụkụ ogwu ahụ na teknụzụ nhazi niile, nke ga-arapara n'akụkụ akụkụ plastik.
IMD / IML ngwaahịa atụmatụ: doo anya dị elu, stereoscopic, adịghị agwụ; nghọta nke anya windo dị elu dị ka 92%; na-eyi na-eguzogide ọgwụ ma na-eguzogide ọkọ maka ogologo ndụ ndụ; buoyancy nke isi na ngwaahịa n'oge ogwu ịkpụzi, isi ndụ nwere ike iru ihe karịrị 1 nde ugboro.
(2). Atụmatụ maka kpọmkwem plastic akụkụ imewe
A. edo mgbidi ọkpụrụkpụ
Na ịkpụzi ọgwụ, plastik ahụ dị na mmiri mmiri maka obere oge, na ịdị n'otu nke mgbidi mgbidi nke akụkụ ahụ nwere mmetụta dị ukwuu na ọsọ ọsọ na ntụziaka nke plastik. Okpukpo nke akụkụ na-agbanwe nke ukwuu, nke ga-eweta ọtụtụ ntụpọ dị mma dị ka ijuputa afọ ojuju, nrụrụ, nshịkọ, akara weld, akara nrụgide na mkpa, wdg. enwere ike imewe. Mgbanwe nke ọkpụrụkpụ ekwesịghị ịdị oke oke, ma mee mkpọda ma ọ bụ arc mgbanwe na mgbanwe ahụ.
B. payaa ntị na nchikota n'etiti akụkụ na-eme ka adabara size ziri ezi chọrọ.
Iji hụ na mgbanwe dị n'etiti akụkụ, anyị na-enyekarị iwu siri ike maka izi ezi nke akụkụ ọ bụla. Ma maka akụkụ plastik, ọ nwere ụfọdụ mgbanwe na elasticity. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụhaala na usoro nhazi ahụ nwere ezi uche, enwere ike idozi ntụgharị site na mmekọrịta dị n'etiti akụkụ, yabụ ọkọlọtọ ziri ezi nwere ike ịdị jụụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji belata nsogbu nrụpụta. Ogo.
C. nhọrọ ihe
E nwere ọtụtụ ụdị ihe plastik, na arụmọrụ ha dịgasị iche iche.
Maka akụkụ plastik ziri ezi, a na-ahọpụta ihe ndị nwere obere mbelata / nrụrụ / nkwụsi ike dị ukwuu / nguzogide ihu igwe dịka ihe eji eme ihe.
(a) ABS / PC nwere obere shrinkage ka eji iji dochie PP na shrinkage dị elu, yana PVC / HDPE / LDPE nwere obere mwepu. A na-eji ABS + GF iji dochie ABS.PC + GF na PC.
(b) Họrọ PA66 + GF ma ọ bụ PA6 + GF kama POM ma ọ bụ PA66 na PA6.
D. jiri nlezianya tụlee usoro ịkpụzi.
(a) Maka ọkpụrụkpụ ọkpụrụkpụ, igbe ma ọ bụ akụkụ diski, ọ ka mma ịmepụta arc microstrip n'elu na mkwado n'ime ime iji zere nrụrụ.
(b) Maka akụkụ dị oke mkpa, ọkpụrụkpụ nke akụkụ ahụ kwesịrị ịdị n'otu, akụkụ dị n'ime ekwesịghịkwa ọgịrịga na-eme ka ọ dị omimi ma ọ bụ akụkụ dị mgbagwoju anya. A na-atụ aro ka ị jiri igwe na-agbazi ọgwụ na-agba ọsọ ọsọ.
(c) A na-eji ihe eji eme ihe na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-ekpo ọkụ ọkụ maka nnukwu akụkụ iji mee ka oge jupụta ma belata nrụgide na nrụrụ.
(d) maka akụrụngwa akụrụngwa nke ejiri ihe abụọ mee, ịmịnye agba agba abụọ kama ịmịnye ya.
(e) a na-atụnye nkedo nkedo kwụ ọtọ maka akụkụ nwere obere ntinye ígwè.
E. Nwere ohere imeziwanye.
Na nhazi nke akụkụ plastik ziri ezi, ọ dị mkpa iji nyochaa ihe ndị nwere ike ime na mmepụta n'ọdịnihu.
(3) Nkwenye nhazi
Ngwunye ogwu nwere oke ego, ogologo oge na ọnụ ahịa dị ukwuu nke mgbanwe, yabụ mgbe emechara akụkụ nke akụkụ, ọ dị mkpa iji mee nyocha nke anụ ahụ iji nyochaa imewe ahụ, iji chọpụta isi ihe eji emepụta ngwa ahịa, chọta nsogbu ma melite n'ọdịnihu.
Ebumnuche nke nkwenye anụ ahụ na-emezu site na ịme ihe nlere. E nwere ụdị prototype abụọ: CNC nhazi yana 3D obibi.
Ojiji nke nyocha nke anụ ahụ na-achọ nlebara anya na akụkụ ndị a:
A.CNC prototype mmepụta akwụ ụgwọ bụ n'ozuzu elu karịa 3D obibi.
Maka nnukwu akụkụ, ọnụahịa nke nhazi CNC dịtụ ala. Maka ihe na akụrụngwa akụrụngwa ma ọ bụ ọgwụgwọ elu na mgbakọ chọrọ, a na-atụ aro nhazi CNC, nke mere na enwere ike inweta ezigbo ike igwe.
Maka obere akụkụ na akụkụ ike dị ala, a na-eji mbipụta 3-D. 3-D obibi akwụkwọ dị ngwa, ọ dịkwa ọnụ ala karịa maka akụkụ pere mpe.
B. Prototypes nwere ike n'ozuzu nyochaa nzukọ kenha n'etiti akụkụ, elele imewe njehie na omissions, na ikwado imewe mma. Otú ọ dị, prototype ike n'ozuzu na-egosipụta na nkà na ụzụ chọrọ nke ebu akpụ, dị ka ịkpụzi draft n'akuku / shrinkage / deformation / fusion akara na na.
2. kpọmkwem plastic akụkụ ịkpụzi
(1) plastic ebu design (ebu imewe)
Ebu àgwà dị elu bụ isi ihe na-eme akụkụ ziri ezi. Isi ihe ndị a kwesịrị ịgbaso.
A. n'ụzọ ziri ezi họrọ shrinkage ọnụọgụ nke plastic ihe. Ezi uche na ọnọdụ nke akụkụ na ebu.
B. ebu isi ihe ga-ahọrọ dị ka ígwè ihe na ezi kwụsie ike / eyi eguzogide / corrosion eguzogide.
C. ebu nri usoro na-eji ọkụ Tsui ma ọ bụ na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ dị ka o kwere mee, nke mere na akụkụ nke ọ bụla nke okpomọkụ edo, belata deformation.
D. ebu ga-enwerịrị usoro dị jụụ dị mma iji hụ na akụkụ dị jụụ na obere oge.
E. ebu ga-enwe mkpọchi n'akụkụ na ngwaọrụ ndị ọzọ.
F. ezi uche setịpụrụ ndị ejection ọnọdụ nke ejector usoro, nke mere na ndị ejection ike nke akụkụ bụ edo na-adịghị nkwarụ.
Ebu imewe na analysis dị mkpa ngwá ọrụ (moldfow): Iji ịme anwansị software nke injection ịkpụzi na-e imitateomi mmetụta nke Ọgwụ na ịkpụzi usoro n'okpuru dị iche iche ọnọdụ parameters, chọpụta ntụpọ na ngwaahịa imewe na ebu imewe tupu, mma na-ebuli ha, ma zere mmejọ ndị kachasị na nrụpụta ebu ruo n'ókè kachasị ukwuu, nke nwere ike ịme ka ịdị mma nke ebu ahụ belata ma belata ụgwọ oge.
(2) nyochaa ihe ebu.
Ọnụ ego nke ebu dị mfe dị ala karịa nke mmepụta akpụzi. Maka akụkụ nkedo plastik kpọmkwem, ọ dị mkpa iji mee ka ọkpụkpụ dị mfe iji nyochaa nhazi nke ebu ahụ tupu emezie ụdị mmepụta ihe eji eme ihe, ka ị wee nweta ọnụọgụ iji melite nhazi nke ebu ma hụ na ihe ịga nke ọma na-emepụta ihe.
(3) nhazi nhazi
A ga-eji ihe eji eme ihe dị elu site na iji igwe ndị a dị elu.
A. elu kpọmkwem CNC igwe ngwá ọrụ
B. mirror sparkle igwe
C. ngwa ngwa waya ọnwụ
D. okpomọkụ na-arụ ọrụ mgbe niile
E. mkpa ule.
Tụkwasị na nke ahụ, nhazi nhazi ga-agbaso usoro siri ike ma dabere na ndị ọrụ dị elu iji rụọ ọrụ.
(4) injection ịkpụzi igwe nhọrọ
Akụrụngwa maka ịkpụzi ọgwụ nke akụkụ plastik ziri ezi.
A. kwesịrị iji igwe ogwu na-akpụzi nkenke na-enweghị ihe karịrị afọ 5 nke ndụ ọrụ.
B. ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ọcha ma dozie.
C. maka akụkụ dị ezigbo mkpa, ọ ga-enwerịrị igwe ịkpụzi ngwa ngwa.
D. agba abụọ ma ọ bụ akụkụ mmiri na-enweghị mmiri ga-enwerịrị igwe ịkpụzi agba abụọ.
F. ụda mmesi obi ike dị mma
(5) mbukota maka kpọmkwem plastic akụkụ
Ezi nkwakọ ngwaahịa dị mkpa iji gbochie ọkọ, deformations, ájá na njem, nchekwa nke kpọmkwem plastic akụkụ.
A. elu gloss akụkụ ga-pasted na-echebe film.
B. akụkụ ndị nwere obere mgbidi nwere ike ịpinye na akpa pụrụ iche ma ọ bụ ụfụfụ, ma ọ bụ kewaa ya site na mma akwụkwọ iji zere nrụgide kpọmkwem.
C. Akụkụ ndị dị mkpa ịkwaga n'ogologo anya ekwesịghị ịtinye na katọn. Otutu katọn kwesiri idozi ya na nkpuchi ya na ndi nche.
Techlọ ọrụ Mestech nwere igwe na akụrụngwa maka ịkpụzi plastik na ọgwụ na-akpụzi ọgwụ. Anyị na-atụ na-enye gị ebu Ndinam na mmepụta ọrụ maka kpọmkwem plastic akụkụ.
Post oge: Ọkt-15-2020
Nkwalite ụlọ ọrụ